गोलभेँडा भन्दा स्याउ सस्तो ! | चितवन पोष्ट
गृह » गोलभेँडा भन्दा स्याउ सस्तो !
गोलभेँडा भन्दा स्याउ सस्तो !
नारायणगढ । शुक्रबार नारायणगढस्थित तरकारी बजारमै प्रतिकिलो १२० रूपैयाँको दरमा गोलभेँडाको बिक्री भयो । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू गोलभेँडाभन्दा स्याउ पो सस्तो रे’छ भन्दै फर्किएका छन् । शुक्रबार नारायणगढमा स्याउ प्रतिकिलो एक सयदेखि १४० सम्ममा बिक्री भएको छ ।
भरतपुर–२७ मेघौलीकी अमृता महतो चितवनकोे बजारमा तरकारीको मूल्य कम नभएको बताउँछिन् । ‘तरकारीको मूल्य छोइसाध्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘किसानले पनि मूल्य पाएन भन्दै गर्दा हामी उपभोक्ताले यति महँगो तरकारी खानुपर्ने स्थिति कसरी आयो ?’
चितवनमा तरकारीको मूल्य फेरि बढेको छ । अहिले सामान्यतया सबैजसो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो एकसय रूपैयाँको हाराहारीमा छ । चाडवाड सकिसक्दा पनि तरकारीको भाउ नघटेको भन्दै उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । अरू बेला चाडपर्वको बहानामा तरकारीको मूल्य बढाएको व्यापारीले अहिलेसम्म पनि तरकारीको मूल्य नघटाएको उपभोक्ताको आरोप छ ।
भरतपुरका पूर्णकुमार श्रेष्ठले तिहारपछि तरकारीको मूल्य आकाशिएको बताए । ‘जति महँगो भए पनि तरकारी नखाइ भएन,’ उनले भने, ‘यसको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरूरी छ । उपभोक्ता पनि यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ ।’
तरकारी महँगो हुँदा सबैभन्दा बढी असर होटल व्यवसायीलाई परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तरकारी व्यवसायीका अनुसार तिहारपछि तरकारीको मूल्य गत १६ गते सबैभन्दा उच्च भएको थियो । अहिले भने तरकारीको मूल्य कम भइसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अहिलेको तरकारी बजारलाई हेर्दा कुनै पनि तरकारी सस्तो छैन । ‘पहिला त चाडबाडमा मात्रै महँगो हुन्थ्यो,’ भरतपुर–८ शरदपुरकी चन्द्रा श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, अहिले चाडबाड सकिँदासमेत तरकारीको मूल्य कम भएन ।’ दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएपछि ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने सामान्य परिवारलाई गाह्रो छ ।
भरतपुर–१० की रीतु खड्काले पनि तरकारीको मूल्य एकोहोरोे आकाशिएको बताइन् । ‘एउटा परिवारको लागि एक छाक तरकारी किन्न कम्तिमा पनि चार÷पाँचसय रूपैयाँ खर्च हुने समय आयो,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेले आफ्नो घर कसरी चलाउने ? तरकारीको भाउ बढेजस्तै ज्याला बढाइदिए त सजिलै हुन्थ्यो । महँगीको जमानामा पनि हाम्रो ज्याला उस्तै ।’
तर, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष थीरप्रसाद धितालले भने तरकारीको मूल्य सामान्यतर्फ फर्किसकेको दाबी गरे । ‘चाडबाडको प्रभाव अझै पनि सकिएको छैन,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘तर, मूल्य समायोजन भइसकेको छ । उनकाअनुसार तिहारपछि छठ, एकादशी लगायतका पर्वले गर्दा तरकारी महँगो भएको हो । पहाडी क्षेत्रमा तीन चारदिनसम्म एकादशीको जात्रामा भुल्ने हुँदा तरकारीको आयात कम भएकोले तरकारी महँगो भएको उनले प्रष्ट पारे । साथै तरकारी काट्ने र ढुवानी गर्नेमा सबैभन्दा धेरै तराइबासीहरू भएकोले उनीहरू छठ पर्व मनाउन घर गएकोले पनि तरकारीको आयात कम हुँदा बजार भाउ बढेको उनको भनाइ छ ।
बजारमा लसुनको मूल्य भने तीनवर्षयताकै कम भएको छ । दुई महिनाअघिसम्म चारसय रूपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको लसुन अहिले १८० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको छ ।